Ukushiya igumbi lakho, ubona ama-candy wrappers, amathoyizi ahlakazekile kuyo yonke indlu, i-juice echithekileyo. Oku akuthethi ukuba ungumfazi womntu ongekho, unomntwana omncinci okhulayo. Indlela yokufundisa umntwana ukuba aphume, engeza kwimiyalelo? Oomama abakwenzayo bajamelana nazo zonke iintlobo zobuqhinga. Kukho iinkalo ezininzi ezibonakaliswe kakuhle kwiintsana. Unokwenza ezi zinto kwaye ubone oko ungakwenza.
Khetha ubuncinane iyure kanye ngeveki, oya kuhlamba kunye nomntwana wakho. Kufuneka uhlambuluke rhoqo. Ngenxa yoko, umntwana uya kuqonda ukuba ukucoca kunye nonina akuphepheki kwaye ngumsebenzi wakhe. Ngaloo ndlela, umntu unokufundela umntwana kule ngcamango, kwaye ukucoca yinto engatshintshiyo kwindlela yakhe. Uya kuqonda ukuba ngokuqinisekileyo uza kususa izinto ezihlakazekile, kwaye uya kuzama ukusabalalisa. Oku kuya kuba ngumkhwa, kwaye xa umntwana ekhula, iya kuba yinto efanelekileyo.
Iqhinga lesibini liphantsi kwesiqubulo esithi "qalisa nawe." Kumele ubonise umntwana ukuba ukucoca akukwenzeleli ubunzima kwaye kukunika uvuyo. Ngokomzekelo wakho, bonisa indlela yokubeka izinto ngokufanelekileyo, xhoma izinto kwaye ugcine indlu ihlambulukile. Ewe, akulula ukubonakalisa uvuyo, ukucoca indlu yakho. Kodwa kufuneka sikhumbule ukuba umntwana uthatha yonke into evela kuwe.
Iqhinga elilandelayo kukuba iinqununu ezincinci ziya kunceda umntwana wakho afunde ukuhlambulula. Masithi:
"Siya kudlala ngaphandle emva kokuba uhlambulule amathoyizi akho."
- Ngokukhawuleza xa wenza ithala lakho, ungadlala imidlalo yekhompyutha.
- Khangela iibhotole, kodwa ngaphambi kokuba ulandele izinto zakho.
Fumana umntwanakho okufunekayo "ukulungelelanisa", ukuze angabhubhisi izinto zakhe kwigumbi. Ngokomzekelo, inani elaneleyo leengubo zokuxhoma, iibhokisi, iibhokisi ezikhethekileyo kunye naba "Abanini", naphi na apho angayifaka khona iidiski zabo. Kwakhona ufake phantsi kwetafile ibhakethi elincinci leplastiki, apho umntwana angayiphosa iphepha elisetyenziswayo. Ingane inokuba neemfihlelo zayo. Ukuze wenze oku, kufuneka abe neebhokisi ezingenanto kwidesksi ukuze agcine iimfihlo zakhe ezivela kuwe-ngamanye amagama, kufuneka abe nesithuba sakhe somntu. Thenga iibhokisi zeplastiki, apho umntwana uya kubamba iimpahla ezingcolileyo.
Fumana izixhobo eziphathekayo, izixhobo kunye neendwangu zegumbi labantwana, ngokukhethekileyo imibala emnyama. Le nto ke ukuba ukuba umntwana enomnqweno wokusula izandla zakhe kwietaleni okanye kwiphephethi, okanye malunga nesigqubuthelo, okanye uya kugawula ijusi, iindawo aziyi kubonakala.
Kule mihla, kukho izikhonkwane ezahlukeneyo zamathoyizi, imilo eyahlukeneyo kunye nemibala. Ukuba indlu yakho igxininiswe rhoqo, izibhobho ezinjalo zilungele kuwe. Intsana iya kuyisebenzisa ngokuvulekileyo ukuba le nkonkxa ifom ye-tiger, ibhere okanye intsimbi.
Ngamanye amaxesha abazali, abaxhaphaza abantwana babo ukuba benze umyalelo, benze iimpazamo. Ungalokothi ubeke imfundiso yokuba umntanakho uxanduva lokucoceka kwindlu. Kubalulekile ukuba ungamxeleli umsebenzi, kodwa uncedo. Ungazami ukufundisa umntwana yonke into kanye-oku kufuneka kwenzeke ngokuthe ngcembe. Kubububugugu kwaye kungenangqiqo ukufuna umntwana ukuba abe nechanileyo, ukuba wena ngokwakho awubonakalwanga ngokucoca. Enyanisweni, akunakwenzeka ukuba umzekelo wabazali ufundisa abantwana ukuthanda ukucoceka. Unokubangela ukuziva unyanisekileyo ukucoca umntwana wakho, ukuba lo msebenzi uza kuhanjiswa kuwe, njengesigwebo. Akusiyo into yokuba akukho nto ithi "awukwazi ukunyanzeliswa ngamandla."
Zama ukusebenzisa izicwangciso zethu. Ukufundisa umntwana ukuba aphume, kufuneka usebenze ngothando nomonde. Kufuneka ukuba bonke baya kuvela. Ukucoceka okulula nokulula!
Impikiswano phakathi kwabazali nabantwana
Kutheni abantwana becinga ukuba abathandwayo
Kutheni umntwana ekhupha kwaye ekopela?
IiSaladi ngoMatshi 8
Silungiselela iingqungquthela ebusika ngaphandle kwembuyekezo kunye nenkcitho engadingekile
Isaladi kunye neklabishi namanqatha
Indlela yokuba ngumqeshwa obalulekileyo?
I-Bijouterie eyenziwe ngesandla
Ukuzibona uhamba elele ebuthongweni bakho
Ukuhlanjululwa ngamanani kwiKrismesi kunye neKrisimesi
Yintoni yokuzila ukudla
Ezona ndawo zizingqonge kakhulu kwihlabathi